बिज्ञान -प्रबिधि Archives - Page2of2- ejhajhalko.com
काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बजेट विनियोजन गर्दा कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेका छन् । कृषिका लागि पठाइएको साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहले पूर्वाधार लगायत अन्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष ०७४- ७५ मा कृषि मन्त्रालयले अर्थ हुँदै स्थानीय तहको लागि विनियोजित गरेको पाँच अर्ब १२ करोड...
तीन महिनाअघि गोरखा मोटर्सको नाममा दर्ता भएको कम्पनीमा आबद्ध युवाहरुले आफ्नै देशमा इलेक्ट्रिक बस उत्पादनको प्रयासलाई अगाडि बढाएका हुन्, त्यो पनि निजी लगानीमा । ‘हाल बसको डिजाइनको काम भइरहेको छ ।’ गोरखा मोटर्सका अध्यक्ष कविन्द्र प्रसाईले भने–‘०७५ सालभित्र एउटा इलेक्ट्रिक बस तयार गछौ । आगामी ५ वर्षभित्र २ जना मान्छ...
महोत्तरी । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा कार्यरत धानसम्बन्धी वैज्ञानिक उज्ज्वल केआरएस कुशवाहालाई सन् २०१८ का लागि ‘इ–लाइफ एम्बेसाडोर’ घोषणा गरिएको छ । सर्लाहीमा जन्मिका कुशवाहा यसअघि सन् २०१६ मा ‘कालो चामलः अनुसन्धान, इतिहास र विकास’ नामक पुस्तक प्रकाशन गरी चर्चामा आएका थिए । हाल उनी भारतस्थित गोविन्दबल्लभ पन्त...
विश्वकै कान्छोे बने इन्टरनेट उद्यमी
छब्बीस बर्षीया ब्राएन वोङ एकजना क्यानाडेली ईन्टरनेट उद्यमी हुन् । विश्वकै कान्छो सफल उद्यमीहरुमध्ये उनी पनि एक हुन् । बुवा एकाउन्टेन्ट र आमा नर्सका जागिरे थिए । तर, छोरा आफ्नो व्यापारमा सफल भए, त्यो पनि कलिलै एमेरमा चर्चित र धनाढ्य उद्यमीका रुपमा । उनी भ्यानकोभरमा जन्मे अनि त्यहीँ हुर्के । बाल्यकाल...
कम्प्युटर स्लो भयो ? छिटो खुल्ने बनाउन यसो गरौँ
कहिलेकाहीँ कम्प्युटर खुल्न धेरै समय लाग्छ । कम्प्युटर चलाउन ढिलो हुँदा कम्प्युटर चलाउन नै हैरान लाग्छ । कम्प्युटरमा राखेका विभिन्न सफ्टवेयर कम्प्युटरसँगै खुल्ने हुँदा कम्प्युटरले खुल्न समय लिन्छ । हामीले सफ्टवेयर इन्स्टल गर्दा खासै ध्यान दिँदैनौँ । जसले गर्दा कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टम खुल्नासाथ क्रमैसँग सफ्टवेयर खुल...
अनौठा नम्बरबाट आएको फोन नउठाउन टेलिकमको आग्रह
अवैध बाटो हुँदै नेपाली नम्बरमा विदेशबाट फोन आउन थालेपछि नेपाल टेलिकमले सचेतना अपनाएको छ । विदेशबाट फोन आउँदा नेपाली नम्बर देखाए १ सय ८८ नम्बरमा फोन गरी नम्बर टिपाउन टेलिकमले प्रयोगकर्तालाई आग्रह गरेको छ । ठगी गर्ने नियतले ‘चिठ्ठा परेको’ भन्दै केही दिन यता विभिन्न सेवाग्राहीलाई गरिएका कलमा समेत यस्ता नम्बर प्रयो...
नयाँ सेल्फी एक्स्पर्ट ओपो एफ-फाइभ २८ गते नेपालमा सार्वजनिक हुने
काठमाडौं । ओपोले नेपाली बजारमा नयाँ सेल्फी एक्स्पर्ट एफफाइभ भब्य समारोहबीच कात्तिक २८ गते सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजना गरिने उक्त समारोहमा हाल चर्चाको शिखरमा रहेका नेपाल आइडलका उत्कृष्ट तीनको समेत सहभागिता हुने निश्चित भएको छ । कार्यक्रममा नेपाल आइडलको उपस्थितीका बारेमा कम्पनीले आफ्नो आधिकारि...
सुस्त टेलिकमः मुख्य शहरमा ‘फोरजी’ पुग्न अझै एक वर्ष !
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले काठमाडौं र पोखरामा फोरजी (एलटीई) सेवा सरुवात गरेको एक वर्ष बित्न लाग्यो । टेलिकमभन्दा ५ महिनापछि फोरजी सेवा थालेको निजी सेवा प्रदायक एनसेलले देशभरका १९ शहरमा विस्तार गरीसक्यो । तर, टेलिकम अन्य शहरमा फोर-जी सेवा पुर्‍याउन एक वर्ष लाग्ने बताउँछ । टेकिलम तीव्र गतिको इन्टरनेटमा आधारित सेवा विस्...
विश्वका सर्वाधिक मूल्यवान ५ सय ब्राण्डको नयाँ सूची सार्वजनिक गरेको छ । बेलायतको भ्यालुएसन तथा स्ट्राटेजी कन्सल्टेन्सी कम्पनी ब्राण्ड फाइनान्सले विश्वका हजारौँ ब्राण्डहरुलाई विभिन्न मापदण्डका आधारमा मूल्यांकन गर्दै वर्षेनी सबैभन्दा मूल्यवान ५ सय ब्राण्डको सूचि सार्वजनिक गर्दछ । यो वर्षको सूचिमा गुगलले एप्पलको ५ वर...